‘ज्यूँदै छन् लादेन, अमेरिकाले दुनियाँलाई ढाँट्यो’
अमेरिकी खुफिया एजेन्सी सिआइएका पूर्व अफिसर एडवर्ड स्नोडेनले सनसनीपूर्ण खुलासा गरेका छन् । स्नोडेनको दावी छ, ‘अल कायदाका प्रमुख ओसामा बिन लादेन ज्यूँदै छन् र उनी बहामासमा बस्ने गर्छन् ।’
एक अंग्रेजी वेबसाइटका अनुसार स्नोडेनले यसको प्रमाण पनि आफूसँग रहेको दावी गरेका छन् । स्मरणीय छ, अमेरिकाले २०११ मा पाकिस्तानमा उसले लादेनलाई मारेको दावी गर्दै आएको छ । यद्यपि, उनको लास दुनियाँले कहिल्यै देख्न पाएन । अमेरिकाले लादेनलाई मारेपछि उसको लास समुन्द्रमा समाधि गरेको दावी गर्दै आएको छ ।
स्नोडेले भनेका छन्, ‘मसँग यसको प्रमाण छ कि लादेन सिआइएको प्रतिज्ञामा रहेका छन् । उनलाई हरेक महिना एक लाख डलर मिल्छ । यो रकम नसाउमा उनको बैंक एकाउन्टमा जम्मा हुन्छ ।’ सिआइएका पूर्व एजेन्टका अनुसार उनलाई यो थाहा छैन कि लादेन अहिले कहाँ छ । तर २०१३ मा उनी आफ्नो पाँच श्रीमतीहरुका साथ एउटा बंगलामा बस्दथे, उनीसँग उनका बच्चाहरु पनि सँगसँगै रहन्थे ।
स्नोडेनले यसअघि पनि लादेन ज्यूँदै रहेको दावी गर्दै आएका थिए । उनको दावी थियो, सिआइएले लादेनको मृत्यूको बारेमा झूटो बोलिरहेको छ । स्नोडेनका अनुसार सिआइएले बहामासको गोप्य स्थानमा लादेनलाई राखेर षड्यन्त्र गरिरहेको छ ।
उनी भन्छन्, ‘सिआइएले आफ्नो मस्ट वान्टेडलाई कसरी मार्न सक्छ ? अमेरिकाले पाकिस्तानसँग मिलेर संसारलाई धोका दिइरहेको छ र यसैको लागि लादेनको मृत्यूको षड्यन्त्र रचेको हो ।’
सिआइएका यी पूर्व अफिसरका अनुसार, दाह्री नपालेका र सामान्य पोशाकमा हिंड्ने लादेनलाई कसैले पनि चिन्न सक्दैन । स्नोडनका अनुसार उनले आफ्नो किताबमा लादेन ज्यूँदो रहेको प्रमाण पेश गर्नेछन् ।
विश्वको सर्वाधिक लामो यात्रुवाहक उडान, न्यूयोर्कबाट सिड्नीमा अवतरण
अक्टोबर ३१ मा नै बेलायत ईयुबाट बाहिरिन्छ : मन्त्री माइकल गोभ
जोनसनले ब्रेक्जिटका लागि समय थप गर्न भन्दै ईयुलाई पत्र लेखे
अमेरिकाले सिरियाबाट फिर्ता हुन लागेका आफ्ना सेना इराकमा तैनाथ गर्ने
कश्मीरमा भारतीय र पाकिस्तानी सेनाबीच गोली हानाहान, ३ को मृत्यु
दक्षिण कोरियाको राजदूतमा नेल्सन मण्डेलाकी छोरी जेनानी नियुक्त
टर्की आक्रमण : उत्तरपूर्वी सिरियाबाट ३ लाख सर्वसाधारण विस्थापित
बेलायत र ईयुबीच ब्रेक्जिकबारे नयाँ सहमति, संसदबाट अनुमोदन होला त ?
टर्कीका राष्ट्रपतिलाई ‘शैतान नबन’ भन्दै ट्रम्पले धम्कीपूर्ण पत्र लेखे (पत्रसहित)
साउदी अरबमा भएको बस दुर्घटनामा ३५ जनाको मृत्यु
भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएपछि राष्ट्रपतिका भाइ जेल चलान
टर्कीले अस्वीकार गर्‍यो अमेरिकाको युद्धविराम प्रस्ताव
उत्तरी सिरियामा ६ सयभन्दा बढी कुर्दिश लडाकु मारिए